doublecab – Toyota Mingalar
May Special Promotion တွေနဲ့အတူ အိမ်မှာနေရင်း ကားဝယ်လို့ရပြီနော်
Toyota Mingalar အား အစဉ်တစိုက်ယုံကြည်စွာ အားပေးကြတဲ့ မိတ်ဟောင်းမိတ်သစ်များအတွက် Toyota Mingalar ရဲ့ May လ (1) ရက်နေ့မှ (31) ရက်နေ့အထိရရှိမယ့် အထူးပရိုမိုးရှင်း အစီအစဉ်တွေ လာပြီနော်….။ လက်ရှိ Covid-19 ရောဂါ ကြောင့် Stay Home နေရတဲ့ အချိန်အတွင်းမှာ Toyota ချစ်သူတွေအနေနဲ့ မိမိအိမ်ထဲမှ နေရင်း အစဉ်ပြေချောမွေ့စွာ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာကားအမျိုးအစားကို အလြယ္တကူ ဝယ်ယူနိုင်ဖို့အတွက် Toyota Mingalar ရဲ့ကျွမ်းကျင်ဝန်းထမ်းများက ဆက်သွယ်ကူညီပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့ကြောင့် Toyota ချစ်သူတွေ အနေနဲ့ ကြိုတင် Booking ပြုလုပ်လိုက်ရုံပဲနော်။ အထူးပရိုမိုးရှင်းတွေအနေနဲ့ Vios ဝယ်ယူတဲ့သူတိုင်းအတွက် Gold Service Package ( or )1 Year Coating Service ရရှိမယ့်အစီအစဉ်။ Avanza ဝယ်ယူတဲ့သူတိုင်းအတွက် Gold Service Package ( or )1 Year Coating Service ရရှိမယ့်အစီအစဉ်။ Innova ဝယ်ယူတဲ့သူတိုင်းအတွက် Gold Service Package ( or ) Lamina Film ရရှိမယ့်အစီအစဉ်။ Rush ဝယ်ယူတဲ့သူတိုင်းအတွက် Gold Service Package ( or ) Free Insurance ရရှိမယ့်အစီအစဉ်။ Extra Cab ဝယ်ယူတဲ့သူတိုင်းအတွက် Gold…
avanza, doublecab, extracab, innova, majesty, promotion, rush, toyota, toyotamingalar, vios
Comments Off on May Special Promotion တွေနဲ့အတူ အိမ်မှာနေရင်း ကားဝယ်လို့ရပြီနော်
👉 နှစ်သစ်မှာ ပရိုမိုးရှင်းအသစ်အသစ်တွေနဲ့ ကားသစ်ကြီးတွေ စီးဖို့အတွက်👈 ❤❤❤ New Year Special Promotion❤❤❤ ၂၀၂၀ ခုနှစ်ရဲ့ နှစ်သစ်ကူးအခါ သမယလေးမှာ Toyota ချစ်သူတွေအတွက် အထူးပရိုမိုးရှင်းလက်ဆောင်များစွာကို Toyota Mingalar မှ ထပ်မံ ယူဆောင်လာပြီနော်…။ 🗓 January (1) ရက်နေ့မှ (31) ရက်နေ့အတွင်း လာရောက် ဝယ်ယူအားပေးတဲ့ Toyota ချစ်သူတိုင်းအတွက် အထူးပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်တွေအနေနဲ့… 👉 Avanza, Extra Cab, Double Cab, Toyota Majesty နှင့် Hiace 14 Seaters စတဲ့ ကားအမျိုးအစားများ ဝယ်ယူသူတဲ့ Customers တိုင်းအတွက် Gold Service Package (or) Free Insurance လက်ဆောင်ပြန်လည်ရရှိမယ့် အစီအစဉ်။ 👉 Rush နှင့် Fortuner ကားဝယ်ယူသူတိုင်းအတွက် Gold Service Package (or) Lamina Film လက်ဆောင်ပြန်လည်ရရှိမယ့်အစီအစဉ်။ 👉 Vios ကားဝယ်ယူသူတိုင်းအတွက် Lamina Film (or) Free Insurance လက်ဆောင်ပြန်လည်ရရှိမယ့်အစီအစဉ်…
avanza, doublecab, extracab, fortuner, hiace14seaters, newyearpromotion, rush, toyota, toyotamajesty, toyotamingalar, vios
Comments Off on New Year Special Promotion
အေးမြတဲ့ ဆောင်းရာသီနဲ့အတူ အရောက်လာမယ့် Christmas Special Promotion
“အေးမြတဲ့ ဆောင်းရာသီနဲ့အတူ အရောက်လာမယ့် Christmas Special Promotion (1-20 Dec,2019 )” နှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလား…..? နှစ်သစ်ကို ကားသစ်ကြီးနဲ့အတူ ပရိုမိုးရှင်းပေါင်းများစွာနဲ့ဖြတ်သန်းဖို့ Toyota Mingalar ရဲ့ Christmas Special Promotion လာပြီနော်….❤❤❤ Christmas အထူးပရိုမိုးရှင်း အစီအစဉ်အနေနဲ့ Hilux Revo Double Cab (သို့) Extra Cab ကားများကို ဝယ်ယူတဲ့ Customers များ အတွက် Gold Service Package နဲ့ Free Insurance လက်ဆောင်များ ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်….😍😍😍 မှတ်ချက်။ ။ပရိုမိုးရှင်းကာလ အနေနဲ့ Dec (1) ရက်နေ့မှ (20) ရက်နေ့ အထိသာ အကျုံးဝင်မှာ ဖြစ်လို့ အမြန်ဆုံး လာရောက်ဝယ်ယူလိုက်တော့နော်….။ အသေးစိတ်ကို 01 514940 ~ 41, 09 267 757 033,09 976 990009,09…
christmas, doublecab, extracab, promotion, toyota, toyotamingalar
Comments Off on အေးမြတဲ့ ဆောင်းရာသီနဲ့အတူ အရောက်လာမယ့် Christmas Special Promotion
သီတင်းကျွတ်မီးထွန်းပွဲ အထူးပရိုမိုးရှင်းတွေနဲ့ တူဆင်နွှဲ ( 1ST – 31ST OCTOBER )
Toyota ချစ်သူတို့ရေသီတင်းကျွတ်အခါသမယလေးကို အထူးပရိုမိုးရှင်း အစီအစဉ်တွေနဲ့ အတူတူ ဖြတ်သန်းဖို့ အဆင်သင့်ပဲလား…? သီတင်းကျွတ်ကာလအတွင်း Toyota ချစ်သူတို့အတွက် အထူးပရိုမိုးရှင်းလက်ဆောင်များအနေနဲ့ 👉 Land Cruiser 200 ဝယ်ယူသူတိုင်းအတွက် Free Yangon License + income tax 50 % Off အစီအစဉ် 😍😍😍 👉 Hilux Revo Double Cab နဲ့ Hilux Revo Extra Cab ဝယ်ယူသူတိုင်းအတွက် Spin And Win Lucky Draw Game ပါဝင်ကံစမ်းခွင့်တို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်…😍😍😍 Spin And Win Lucky Draw Game အစီအစဉ်မှာ ပါဝင်တဲ့ ဆုလက်ဆောင်လေးတွေကတော့… (1) 1% Income Tax(2)…
brandnewcar, doublecab, extracab, landcruiser, promotion, thadingyut, toyotamingalar
Comments Off on သီတင်းကျွတ်မီးထွန်းပွဲ အထူးပရိုမိုးရှင်းတွေနဲ့ တူဆင်နွှဲ ( 1ST – 31ST OCTOBER )